Identity ao amin'i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy
Ny ankamaroan'ireo izay mihoatra ny 50 mahery dia hahatsiaro an'i Nikita Khrushchev. Lehilahy manana loko mareva-doko sy tafio-drivotra izay, amin'ny maha-mpitarika ny Firaisana Sovietika teo aloha, no nitifitra ny kirarony teo amin'ny lampihazo rehefa niteny tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana izy. Fantatra ihany koa izy noho ny fanazavany fa ny olombelona voalohany tany anaty habakabaka, ilay cosmonaut Rosiana Yuri Gagarin, dia "niditra tao anaty habakabaka fa tsy nahita andriamanitra tao". Raha ny amin'i Gagarin tenany manokana, tsy misy firaketana an-tsoratra izany fa mbola nanao fanambaràna tahaka izany mihitsy izy. Saingy mety i Khrushchev, fa tsy noho ny antony tao an-tsainy.
Satria ny Baiboly mihitsy no milaza amintsika fa tsy nisy nahita an’Andriamanitra afa-tsy iray ihany, dia Jesosy, Zanak’Andriamanitra. Izao no vakintsika ao amin’ny Jaona: “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; ny lahimatoa, izay Andriamanitra ao an-kibon’ny Ray, no nanambara Azy tamintsika » (Jao 1,18).
Tsy toa an'i Matio sy Marka ary Lioka izay nanoratra momba ny nahaterahan'i Jesosy, nanomboka tamin'ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy i Jaona ary nilaza amintsika fa Jesosy dia Andriamanitra hatrany am-piandohana. Izy no ho "Andriamanitra miaraka amintsika", araka ny faminaniana nambara mialoha. Nohazavain'i Jaona fa tonga olombelona ny Zanak'Andriamanitra ary niara-nonina tamintsika mba ho iray amintsika. Rehefa maty Jesosy ary natsangana ho velona ka nipetraka teo ankavanan-drainy dia nijanona ho olombelona, ​​olona nankalazaina ary feno Andriamanitra ary feno olona. I Jesoa mihitsy, ilay Baiboly mampianatra antsika, dia ny fiombonana avo indrindra eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona.
Ao amin'i Johannes 5,39 Izao no voalaza ao amin’i Jesosy: “Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa manana fiainana mandrakizay izy; ary izy no manambara Ahy; fa ianareo kosa tsy te hanatona Ahy hanana fiainana. Eo ny Baiboly hitondra antsika ho eo amin’i Jesosy, hanehoana amintsika fa namatotra mafy ny tenany tao amin’i Jesosy tamin’ny alalan’ny fitiavany Andriamanitra ka tsy hamela antsika velively. Ao amin’ny Filazantsara dia izao no lazain’Andriamanitra amintsika: “I Jesosy dia iray amin’ny olombelona ary iray amin’ny Ray, izany hoe ny olombelona dia mizara ny fitiavan’ny Ray an’i Jesosy sy ny fitiavan’i Jesosy ny Ray. Izao no lazain’ny Evanjely amintsika: Satria tia anao tanteraka sy tsy azo toherina Andriamanitra, ary efa nataon’i Jesosy izay rehetra tsy ho vitanao ho an’ny tenanao, dia afaka mibebaka amin’ny fifaliana ianao izao, mino an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy anao, mandà ny tenanao ianao, raiso. ny hazo fijaliana ary manaraha Azy.